Turkiga: Maxaa Ka Dhab Ah Inqilaabka Dhicisoobay? Qallinkii Xassan Cumar Hoorri, Qaybta Shanaad |
Turkiga: Maxaa Ka Dhab Ah Inqilaabka Dhicisoobay? Qallinkii Xassan Cumar Hoorri, Qaybta Shanaad
Durba qaar ka mid ah raggii iyo haweenkii ka talinayay dalka ayaa la soo jafay, waxaana loo taxaabay xabsiyada iyagoo xidhan dharkii jiifka. Dhinaca kale
Dagaalka Internetka ee Jebiyay Ciidan Qaran?
Goor uu gabbalku dumay, ciidan qorshaysan ayaa ka soo ruqaansaday xerooyinka; kuwo si gaar ah u tababaran ayaa isku gedaamay xarumaha dawladda; cutubyo aad u feejigan ayaa, iyaguna, faraha ku dhigay isgaadhsiinta iyo warbaahinta dalka.
Sida la moodayay, waxaa fulay Afgembi (coup d’état). Taangiyo iyo gawaadhi gaashaaman ayaa dhex gurguuranayay faras-magaalaha. Saraakiisha iyo dableyda gaashaan-dhigga ayaa isa soo dhoobay buundooyinka iyo jidadka, halka dayuuradaha dagaalku ay dhoola-tus kor heehaabayeen dadweynaha.
Durba qaar ka mid ah raggii iyo haweenkii ka talinayay dalka ayaa la soo jafay, waxaana loo taxaabay xabsiyada iyagoo xidhan dharkii jiifka. Dhinaca kale, waxaa xoog lagu muquuniyay ilaaladii madaxda ee iska caabisay
weerarka lagu soo kediyay. Dad ayaa dhintay. Kuwo kale ayaa dhaawac ah. Amintaa, telifishanka qaranka iyo warbaahinta dunida waxaa ka baxayay war loo xiiso qabay. Afhayeenka wasaaradda gaashaan-dhigga ayaa akhriyay war murtiyeed aan ka badnayn saddex weedhood.
“1. Markii ay arkeen xaaladda uu dalkeennu marayo, iyadoo aan dhiig ku daadan, ciidamada qalabka sidaa waxaa ay si buuxda u la wareegeen taladii dalka. 2. Waxaa la laalay distuurkii, waxaana dalka lagu soo rogay xukun degdeg ah ilaa iyo amar danbe. 3. Waxaa la farayaa dadweynaha in ay u hoggaansamaan, lana shaqeeyaan ciidanka ilaa iyo inta dalka lagu soo celinayo majarahii ay ka marin habaabiyeen kuwii lafahooda u danaysanayay.”
Inkastoo la fuliyay dhammaan shuruudahii looga baahnaa in uu taabbo galo afgembigu, haddana, 15kii July, dalka Turkiga ka ma uu meelmarin isku deyay lala maaganaa in lagu afrogo Madaxweyne Erdogan. Waxaa dhicisoobay inqilaab dhammays ahaa. Sidaa darteed, waxaa adduunka ku soo soo kordhay cashar aan hore loo aqoon. Haddaba, maxaa dhacay?
Haddii ay tahay farriin Madaxweyne Erdogan ka laliyay warbaahinta bulsho ee FaceTime taasoo si too s ah looga baahiyay telifishinka CNN, laanta AfkaTurkiga iyo haddii sirdoonka Ruushku fashiliyeen waxaa hubaal ah Madaxweyne Erdogan in uu ku badbaaday kaalinta, waayahan danbe, isgaadhsiinta iyo mareegaha internetka ay ku leeyahiin nolosha.
Kaalinta Ruushka ee Afgembigii Dhicisoobay
Sida la og yahay waxaa aad u liitay xidhiidhka ka dhexeeya Turkiga iyo Iiraan, haddana iyaga ayaa ugu horreeyay in ay canbaareeyaan inqilaabka, isla markaana, taageeray xukuumadda Erdogan ee la soo doortay. Wakaaladda Wararka Faaris ee Iiraan ayaa baahisay in Sirdoonka Ruushku fashiliyay inqilaab lala beegsanayay Turkiga ka dib markii ay xuuraan ku heleen dhaqdhaqaaqa socday iyo xogo sir ah oo ay isdhaafsdeen ciidanka Turkigu.
Kal hore, markii Ruushku uu soo faro-geliyay Suuriya, Sirdoonka GRu ee ka tirsan Agaasinka 6aad ee mileteriga waxaa uu xarun ka dhigtay garoonka dayuuradaha Hmemim ee magaalda Laadiqiya. Halkaa, waxaa u yaalla qalab casri ah si ay ugu dhega-dhegeeyaan ama ugu indho-indheeyaan dhaqdhaqaaqa Bariga Dhexe. Qalabku waxaa uu dabooli karaa xuraanka, cod iyo muuqaal, dalalka Turkiga, Suuriya, Ciraaq, Sacuudiga, Urdun iyo Israa’iil.
Sirdoonku waxaa ay daahfureen farriimo xasaasi ah oo ay isu gudbinayeen raggii inqilaabka holliyay. Ugu danbeyntii, waxaa ay xayir-fureen (deciphered)amar kamaandoosta lagu siiyay in ay dayuuradaha marrawaxadda ku weeraraan xeebta Marmaris halkaasoo uu nasasho ku joogay Erdogen. Ciidanka waxaa la faray in ay soo xidhaan ama ay soo dilaan madaxweynaha.
Sida wakaaladdu sheegtay, Ruushku waxaa uu Turkiga gaadhsiiyay xogtii ay heleen. Taasna waxaa ka marag kacaya wareysi uu dhowaan bixiyay, Hakan Fidan, Taliyaha Sirdoona Turkiga (MIT) isagoo ku sheegay, 15kii July, abbaaro 3.00 galabnimo, in ay heleen xog tibaaxaysay dayuurado ka kacaya garoonka Guvercinlik, agagaarka Ankara si ay u weeraraan bartii uu ku sugnaa madaxweynahu. Waxaa soo if baxday xogtii la helay in ay muddo 12 saacadood ah soo dedejisay amintii loo qorsheeyay afgembiga taasookeentay in si habqan ah loo galo hawsha. Madaxweyne Erdogan waxaa uu lafihiisa la baxsaday 15 miridh ka hor intii aanu colku soo gaadhin huteelkii u deggenaa.
Dhinaca kale, farriin Madaxweyne Erdogan uu u dawiyay warbaahinta ayaa loo aanayn karaa in ay sabab u ahayd guuldarradii inqilaabka. Farriintu waxaa ay beenisay warkii ciidamado ku sheegteen in ay si buuxda gacanta ugu hayaan dalka. Madaxweynahu waxaa uu caddeeyay inuu bedqabo iyo inuu yahay sharciyaddii dalka. Waxaana uu shacabka ka codsaday in ay isugu soo baxaan jidadka iyo fars-magaalaha si ay u difaadcaan sharciyadda xukuumaddii ay soo doorteen.
Durbaba, farriintii Erdogan waxaa ay dhex jibaaxday warbaahinta bulshada ee FaceTime, Twitter, Facebook iyo telifishanada. Dadweynahu saqdii dhexe ayay isugu soo baxeen jidadka.Waxaana ay u babacdhigeen hubkii laxaadka lahaa ee ummadda lagu cabudhinayay. Shacabku ma ay is taagin ilaa Madaxweyahu ka soo degay Garoonka Caalamiga ee Ataturk, Istanbul. Waxaana isku hareereeyay kumanyaal naftooda u huray in ay meel ku la dhintaan.
Shir jaraa’id oo uu madaxweynahu ku qabtay garoonka waxaa uu ku sheegay, “kuwa inqilaabka wadaa in ay dadka u quudheen qoriga caaradiisa.” Isla markaa, si beer-nugul badan waxaa uu u sheegay, “wax yar ka dib markii aan soo ambabaxay,waxaa ay hub culus ku garaaceen huteelkii aan ka degenaa xeebta Marmaris.” Erdogan waxaa uu shacabka ka codsaday in ay is ka caabiyaan qawlaysatada ku soo duushay hannaankii dimuqraadiyadda.
Markii uu baxay warku, muxaafid iyo mucaarid, waxaa dadku isugu soo banbaxeen fagaarayaasha Istanbul iyo Ankara. Isla markaa, farriin (SMS) ayaa Madaxweynahu u diray moobilada dadweynaha si uu ugu sii adkeeyo “in aanay dib u laaban, ilaa iyo inta laga jebinayo ka soo horjeeda xasiloonida, iyo rabitaanka ummadda.
Waxaa guulaystay farriimahii Madaxweynaha. Waxaana jabay afgembigii qorshaysnaa.
Dulucdu waxaa ay ahaan jirtay in shacabku ku aamuso marka uu ciidanku sheegto in ay la wareegeen taladii dalka. Balse hadda waxaa barbar taallay xukuumad aan weli gabin in ay hadasho iyo dadweyne u heellanaa in ay difaacaan erayga soo yeedhaya iyo in ay naftooda u huraaan qadiyadda ay aaminsan yahiin. Edward Luttwak oo qoray buugga Coup d’État (Afgembi) ayaa ka deyriyay in uu hirgeli karo inqilaab haddii aan laga aamusin warbaahinta bulshada taasoo aan suurtagal ahayn. Sidoo kale, waxaa ay horseed ka ahayd isu soo baxyadii aan hubaysnayn ee lagu tuuray talisyaddi Tuunis, Masar, Yaman iyo Liibiya. Sidaa awgeed, warbaahintu waxaa ay tahay awood aan la loodin karayn iyo seef labo af leh oo dhan kasta wax u xiirta.
Xidhiidhka Ruushka iyo Turkiga
Haddii Putin uu bixiyay Erdogan iyo haddii kaleba, waxaa hubaal ah in aanay labadoodu kala maarmayn. Labadaba, waxaa uu Maraykanku geliyay go’doon ay ka sii hooban karaan haddii aanay helin jid ay ka baxaan. Madaxweyne Erdogan waxaa uu si cad inqilaabkii ugu eedeeyay xukuumadda Obama. Mana muuqato si loo dhayo ama loo kabi karo biixida jabtay.
Afgembigii, waxaa Turkiga ku sugnaa Alexander Dugin oo farriin ka siday Ruusha. Waxaa uu la kulmay Maayarka Ankara, Melih Gokcek oo saxiib soke la ah madaxweynaha. Dugin waxaa uu sheegay, “Turkigu waxaa uu maanta u kala baxay muwadiniin dalkooda aad u jecel iyo koox yar oo metesha Xarrakada Gulen iyo Sirdoonka Maraykanka.”
Maayarka Ankara, Gokcek, ayaa geestiisa ka sheegay, “hadda waxaan ogaanay dhibta ay leedahay dawlad, dawlad kale ku hoos jirta taaso ay Xarrakada Gulen iyo Maraykanku ka dhex abuureen Turkiga.” Waxaana uu raaciyay, “hase ahaatee, annaga ayaa sixi doonna khaladkayaga. Tallaabada kowaad waxaa ay noqon doonta in aanu xidhiidh soke la yeelano Ruushka.”
Alexander Dugin ayaa ugu warceliy, bal marka hore, in uu Turkigu iskaga baxo gaashaan-buurta NATO. “Ku soo biira xulufada Ruuska si aan Maraykan dibedda ug dhigno Badweynta Madow.” Waxaa kale oo uu sheegay dayuuraddii Turkigu uu ka soo riday Ruuska in ay ka danbeeyeen sirdoonka Maraykanka iyo fallaagada Gulen si colaaddu u dhex mirato labada dal.
5555Afgembiga, laba toddobaad ka hor, Madaxweyne Erdogan waxaa uu xaal iyo raalligelin ka bixiyay falkii askartiisu ku soo rideen dayuuradda dagaal ee Ruushka. Muranka ka dhashay dayuuradaa ayaa aad u xumeeyay xidhiidhka labada dal iyadoo markii hore Turkigu ku adkaystay in soohdintooda lagu soo xadgudbay. Hase ahaatee, telifishanka RT ee Ruushka ayaa maalmahan baahiyay, duuliyahii F-16 ee soo riday dayuuradda Ruushka inuu u adeegayay Xarrakda Gulen iyo sirdoonka Maraykanka si loo kala dilo Erdogan iyo Putin oo markaa si weyn isu kaashanayay.
Hadda, Ruushku waxaa uu oggolaaday dayuuradahiisa ganacsi in ay dib uga gooshaan Turkiga. Waxaana u qaaday cuno-qabatayn dhaqaale ee uu ku soo rogay Turkiga. Waxaa dib loo ambaqaaday wada hadalo looga wada xaajoonayo mashruuc aad u ballaadhan si gaaska Turkiga loo gaadhsiiyo Ruushka iyo Yurub. Waxaa la dhisi doonaa dhuumo isku xidha labada dal, kana sii tallaaba dalka Ukraine. Labada madaxweyne waxaa ay ku heshiiyeen in la dardar geliyo iskaashiga dhaqaale, siyaasad iyo nabadgelyo iyagoo 6da August u mudeeyay in ay ku kulmaan caasimadda Moscow.
Haddaba, maxaa laga filan karaa xidhiidhka Turkiga iyo Ruushka? Ka hor se, maxaa wadaadka Fethullah Gulen uu kaga jawaab celiyay eedahii loo soo jeediyay? Maxaa se Maraykunku ka yeelli doonaa codsigii Turkigu uu ku weydiistay in loo soo gacan geliyo eedaysanaha? Jawaabaha iyo waxii faallo dheeraad ah ka akhri Qaybta 6aad .
Xassan Cumar Hoorri waa suxufi ka faallooda arrimaha Geeska iyo Bariga Dhexe. Kala xidhiidh hassanhorri@gmail.comama ku tixraacTwitter @horrimania